Daawo:- Ciidamada Nabad Sugida Magaalada Muqdisho Oo Ganacta Ku Dhigay Maandooriye Tiro Badan (Daawo Maqal Muqal)
Fikradaha Muqaalo taariikh Wararka Waraysi Youtube November 26, 2017
Muqdisho(Allssc):Ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxa ay kusoo qabteen waxyaabaha Maanka dooriya iyo dadkii isticmaalayay.
Booliiska ayaa si gaar ah howlgalka uga fuliyay xaafado katirsan Degmada Cabdicasiis, waxa ayna halkaasi kusoo qabteen waxyaabaha Maanka dooriya oo isugu jiray Qamri, Calaq iyo Xashiish.
Ciidamada booliiska ayaa sidoo kale soo xiray tiro dad ah oo isugu jiray kuwa isticmaalayay waxyaabahan maanka Dooriya iyo dad kale oo iyana ka ganacsanayay Maandooriyaha guryahoodana ku heestay.
Dadkan lagu soo qabtay waxyaabaha Maanka dooriya ayaa la filayaa in loo gudbiyo Maxkamad si loogu qaado kiiska dambiyada loo heesto, waxaana hada dadkan ku xiran yihiin saldhig ay leeyihiin ciidanka booliiska.
Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa dagaal kula jira waxyaabaha maanka Dooriya iyo waliba dadka isticmaala, waxa ayna Booliiska horey usoo qab qabteen dad badan oo isticmaalayay Maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsanayay.